B2B Marketing Guide hitarika ny valin'ny varotra | Martech Zone
B2B Marketing Guide hitarika ny valin'ny varotra
Talata, Febroary 25, 2014 Alatsinainy 24 Febroary 2014 Douglas Karr
Ity infographic avy amin'ny Introhive manao asa tsara amin'ny famotehana ny tetika mankany amin'ny fantsom-barotra ho an'ny asa aman-draharaha (B2B) ezaka marketing izay mitarika ny valin'ny varotra. Tsy azoko antoka fa ny torohevitra eto dia tokony ekena ara-bakiteny avy amin'ny fikambanana B2B rehetra, saingy manome famaritana lehibe momba ny fomba mety ahazoan'ny zana-tsoa tombony amin'ny varotrao.
Ity loharanom-pahalalana ity dia natao hanampiana anao hahatakatra ny tontolon'ny varotra B2B sy ny varotra mba hahafahanao mamantatra ireo paikady sy tetika mety amin'ny orinasanao. Taorian'ny fandalinana am-pitandremana sy traikefa an-taonany maro tamin'ny varotra B2B, dia nijery ny fahombiazan'ny zava-drehetra hatramin'ny Twitter ka hatramin'ny antso mangatsiaka.
Introhive dia sehatra fivarotana sosialy izay misy sarintany ny fifandraisana misy eo amin'ny orinasa sy ny mpanjifany ary ny vinavinany.
Tags: b2bmanelingelinaSocial Media Marketingfivarotana ara-tsosialy
Introhive: Mikasa, mivarotra ary mitazona amin'ny fivarotana ara-tsosialy
Feedbag.io: Fitaovana fiaraha-miasa amin'ny endrika maivana